यी मोडलको फिगर देखेर चकित पर्छन् सबै ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
यी मोडलको फिगर देखेर चकित पर्छन् सबै !
सामाजिक संजालमा आजभोलि सुन्दर युवतीका तस्वीरहरु भाइरल हुने गर्छन् । यस्तै एक सुन्दरीका तस्वीरले अहिले इन्टरनेटमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । उनको सुन्दरता देखेर मानिसहरु मोहित भइरहेका छन् । यी सुन्दर युवतीको नाम हो ग्रेसिएला मोन्टेस ।
ग्रेसिएला अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्छिन् । ग्रेसिएला पेशाले एक मोडल हुन् र उनको उमेर अहिले मात्रै २२ वर्ष छ । उनले अहिले आफ्नो आकर्षक शरीरका कारण संसारभरसनसनी मच्चाएकी छिन् ।
ग्रेसिएला सामाजिक संजालमा सक्रिय रहन्छिन् । उनी आफ्ना फोटोहरु इन्स्टाग्राममा पास्ट गरिरहन्छिन् । ग्रेसिएलाको इन्स्टाग्राममा झण्डै १० लाख फलोअर छन् जो उनका सुन्दर तस्वीरहरुको प्रतिक्षा गरिरहन्छन् । ग्रेसिएलालाई क्यालिफोर्नियाकी सबैभन्दा हट मोडल मानिन्छ ।
ग्रेसिएलाको सुन्दर शरीर देखेरधेरैले उनले प्लास्टिक सर्जरी गराएको ठान्छन् तर उनले प्यास्टिक सर्जरी गराएकी होइनन्, यो शरीर प्राकृतिक नै हो । ग्रेसियाले २०१७ मा मिस सान जुआन युएसएको उपाधि जितिसकेकी छिन् ।
हेर्नुहोस् ग्रेसिएलाको हट फिगर देखिने फोटोहरु :